I Florence & Milly dia studio zavakanton'ny seramika manolotra kilasy seramika sy tanimanga, manome vilany vita amin'ny paozy alohan'ny handokoana azy sy hanamboarana azy manokana, zavakanto kanto ary ny dian-kazo vita amin'ny seramika. Ny rivo-piainan'ny studio Florence & Milly amin'ny ankapobeny dia sariaka ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, mahatonga azy io ho toerana mety ho an'ny sokajin-taona rehetra mba hifaneraserana amin'ny tontolo azo antoka sy mahafinaritra.
Ny tanimanga sy famatsian-tsakafo efa nialoha an-dry Florence sy Milly dia omena ny mpanjifa handoko ny entana nofinidiny ary hanisy fikitika manokana na tsy misy fitarihana ho fanomezana na fitadidiana. Ny entana farany dia avela hodi-maso ary halefa ao anaty lafaoro. Ireo entana dia azo angonina ao amin'ny magazay ao anatin'ny herinandro na apetraka amin'ny sarany fanampiny. Ny kojakoja rehetra amin'ny latabatra dia sakafo sy fanasana vilia lovia azo antoka rehefa voadio sy voaroaka indray.
Ny faritry ny asa-tanànan'i Florence sy Milly dia toeram-pialofana miaraka amin'ny atrikasa, fampianarana ary fampisehoana azo ampiharina amin'ny zavakanto toy ny tanimanga, sary hosodoko, sary hosodoko, sary hosodoko ary famitana vita amin'ny fanaka fototra, fanaka ambony bisikileta, famoahana bisikileta, asa-tanana, volon'ondry asa-tanana, sary hosodoko, sary momba ny fiainana ary maro hafa.
Ny hetsika rehetra dia ahafahan'ny ankizy sy ny olon-dehibe maneho ny lafiny mamorona azy, mandany fotoana tsara miaraka amin'ny namana sy fianakaviana, ary mamorona entana miavaka ho azy ireo na ho fanomezana.
Zavakanto & Kolontsaina, fiantsenana, Fianakaviana ankohonany, Andro orana, Naas
Ny lalan-drano, Sallins, County Kildare, W91 TK4V, Irlandy.
Talata - Sabata: 9.30 maraina - 6 hariva